Ukujonga kwakhona 'iiTwin Peaks' Isiqendu 6: Kuphela ngabantu abaDala abaDala abafuna ukufaka isicelo - Itv
Eyona Itv Ukujonga kwakhona 'iiTwin Peaks' Isiqendu 6: Kuphela ngabantu abaDala abaDala abafuna ukufaka isicelo
Ukujonga kwakhona 'iiTwin Peaks' Isiqendu 6: Kuphela ngabantu abaDala abaDala abafuna ukufaka isicelo
Owu, Malume Jer.
Ukuba uziva ushiywe ngaphandle kuyo yonke i-Twin Peaks phenomenon, silapha ukunceda! Veki nganye, nxulumana nomhleli we-tvUkhuphele umhleli uVinnie Mancuso uzama ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni esixekweni kule dolophu, ngelixa umhleli ophezulu / ingcali yeTwin Peaks uDrew Grant ephendula imibuzo yakhe. Kule veki: 'Amaphupha ka-Cooper.'
Masiphinde, ngaba thina, izinto uDrew andifundise zona ukuza kuthi ga ngoku kule ndlela imnyama siyibizayo Iincopho zamawele , Kwaye ubone ukuba ndikho kufutshane na ekuqondeni… nantoni na: UBOB ngoyena mntu unxiba ngokunxibayo nakweyiphi na iseti yeTV, kodwa uBOB noMike oxhobileyo omnye abafani noMike noBobby kwaye abafani nabo xa bengalali, izikhova aziyonto oyicingayo ngaphandle kwe-DJ's, kwaye ngokusisiseko Iincopho zamawele Kufana nexesha u-Drew azame ukwenza iitapile-xa yena e-Ambien.
Um. Kulungile. Ewe ndiza kungena kwisiqendu sesithandathu ngokungathandabuzekiyo, Amaphupha ka-Cooper, ngethemba lokuba siyayikhanyisa le mfihlakalo.
Oh Thixo. UThixo, hayi, hayi ayincedanga. Hayi.
Masiqale izinto, njengoko zonke izinto kufuneka ziqale, kunye noMargaret kwiLog Lady. Isigodo seLog Lady, ukuza kuthi ga ngoku, lelona ngqina linokuthenjwa elinalo nabani na kwityala likaLaura Palmer. Ayazi kuphela ulwazi oluthe kratya malunga nokwenzekileyo ngobo busuku, kodwa inomdla ngakumbi kunoJames. # Log4StarringRole. Ngapha koko, uMargaret esenza yonke into ayithethayo, ilog idlulisela kuDale Cooper no-Co ukuba ibone amadoda amabini kunye namantombazana amabini ngobusuku uLaura Palmer abulawa. Bekukho ezinye izikhova ezinye zihleka, kucingwa ukuba azikho kwizikhova kodwa oko akucaci. Ekugqibeleni yonke into yaba noxolo kunye nobumnyama. Uyakwazo oko? Ndicinga ukuba ukhona ngokuqinisekileyo wabulawa ngobo busuku.
Ngayo yonke loo nto iluncedo yokuloba, abacuphi babuyele ehlathini, apho bakhubeka khona kwenye indlu yehlathi. Iindaba ezimbi, le ayiqulathanga nelog enye enomdla. Iindaba ezimnandi, ngokucacileyo iqulethe imeko yokubulala kunye neziqwenga zobungqina. Uthatha okulungileyo ngokubi, ndicinga njalo. Kodwa kukho inqwaba entle yegazi, intaka yaseMyna kunye nekhamera enefilimu kuyo, kunye ne-cuckoo-clock egcwele ii-One-Eyed Jack tokens ekubonakala ukuba uLaura Palmer wasebenzisa njengomatshini weelekese ngaphambi kokuba abulawe.
Kwenye indawo kwiTwin Peaks, uDonna noJames basebenza nzima bandenza ndibathiye. Kwangoko sifunda ukuba abazali bakaJames abafanga, enyanisweni, bafile-umama wakhe ulihenyukazi elinxilisayo kwaye utata wakhe, okulusizi nangakumbi, uyimvumi nje. Kodwa iimfihlo zexesha elidlulileyo likaJames azimnqandi kwaye uDonna angazami ukuya ezantsi kwetyala likaLaura, nokuba. [Laura] uphandle ebhadula njengomoya ongazinzanga, utshilo uJames. Ewe, ukubhadula kwaye uthanda, ukubukela nina bantu nenza izinto.
Aba babini baqesha uMadison emsebenzini wabo wobuphenyi, kwaye uMadison wothukile banokuba bangaphaya kwinto ethile. Sinezimvo ezithile, utshilo uJames. Hayi, awunayo. Awunazo izimvo. Malunga nantoni na. Ngonaphakade. Hmm, ewe, izimvo.
UMadison ufumanisa ikhasethi yokurekhoda (ayizukuvakala iminyaka yam kodwa ngaba ndithetha njalo? Rekhoda iteyiphu?) Kwindawo yokufihla endala kaLaura. Ngelishwa uMadison akanalo umdlali wekhasethi, ke ngubani owaziyo ukuba yeyiphi into ebhanjiweyo ebhanana ekuloo nto.
Ugqirha uJacoby… mhle kakhulu emsebenzini wakhe, enyanisweni. Uya ngqo kumbindi kaBobby ngokubuza ukuba wakhala okokuqala yena noLaura benza uthando ( isebenza ngalo lonke ixesha ). Ujika nguLaura ohlobo lokutsala uBobby kwindawo emnyama emnyama engaphantsi kweTwin Peaks, hayi ngenye indlela. UBobby uyachukumiseka kwaye zehle iinyembezi, ngaphambi kokuba sikhawuleze-sinyibilike okhozi lubhabha ngokuqaqambileyo ekuphumeni kwelanga nje ukukukhumbuza ukuba lo mboniso wenziwa kwakudala.
U-Audrey ngokungathandabuzekiyo nguBatman kuDonna noJames, Ubuninzi kunye noKhakhayi . Ngelixa i-D & J ibambe iintlanganiso ezifihlakeleyo kubaphenyi kwiindawo zokutyela esidlangalaleni, u-Audrey uxakekile eyomeleza umfana ukuba afumane umsebenzi kwikhawuntara yesiqholo engaqondakaliyo, kwaye elala efuna ulwazi oluninzi oluhle. Ngoku uyazi kungekuphela ngokungathembeki kukayise, kodwa icebo lakhe lokutshisa iPackard Mill. Intando kummeli wethambo uDale Cooper sisikhuthazi esomeleleyo, ndicinga njalo.
U-Leland Palmer waphinda wabonisa ukuba ungoyena mntu undwendweleyo, othanda ukudanisa yedwa, lukhetho olungaqhelekanga xa uBen Horne eyibeka icace into yokuba u Thixo weNdudumo ukhona.
Esi siqendu siphela (kungabandakanyi uDale Cooper ukufumana u-Audrey ebhedini yakhe, kuba ngubani ongakubonanga oko kwenzekayo ekugqibeleni) no-Leo Johnson ebuyela ekhaya evela ku-Hank Jennings ebetha. UShelley, othathe nje kangangoko anakho ukuthatha, ukhupha umpu wakhe omncinci kwaye udubula uLeo. U-Leo wenza imisindo yezilwanyana. Yonke into engaqhelekanga kakhulu.
Ndicinga ukuba ndinokuba nemibuzo.
Ngaba sikholelwa ukuba uDale noHarry bathatha yonke into yelog ngokungxama, okanye ngaba bacinga ukuba uLog Lady ngumntu ogezayo ngokucacileyo osebenzisa ilog njengendawo yokuphuma ayibonileyo ngobo busuku? Yeyiphi, ngaba ayinakwenza ukuba uhlobo lwayo lungathembeki?
Siyazi ukuba uDale uneendlela ezithile ezingaqhelekanga ezibonakala zingangqinelani noko ndicinga ukuba zikwincwadi yesandla yeFederal Bureau. Uthatha amanqaku emaphupheni akhe, uphosa amatye kwiibhotile ukuze afumane umkhondo, akachasanisi namapolisa endawo ngexesha lophando. J EDGAR UYAJIKELELA ENGCWABENI YAKHE NGEPINIKI, NXIBELELANE. Ke kutheni uDale engamele ukumamela uguqulo lweLog Lady yelog yakhe. Nokuba uyaphambana, ebakhokelele ekhayeni, oko kuthetha ukuba elona cala lilibi ulingqina ekubulaweni kwakhe kwaye usebenzisa ilog njengesixhobo esithile esingafaniyo nesinye. Ngokuqinisekileyo, awunakumbeka estendini, kodwa ubeluncedo kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
Ke uBen Horne uwela umnqamlezo ophindwe kabini? Okanye ngaba uJocelyn Packard udlala wonke umntu?
Andiqondi ukuba ezo ngcamango zimbini ziyaphikisana. Into esiyaziyo kukuba uJocelyn akangomntu umsulwa esimbonile ukuba ukhona, kwaye uBen Horne ubuyela emva kukaKatherine. Ukunyaniseka nangona kunjalo, ngubani okhathalele uKatherine? Ngoyena mntu ukhohlakeleyo. Uyazi ukuba ndiva kabani? USheriff Truman kunye noPete, abona bantu basebenzayo kolu phuhliso. Kukwakho noLaura, ochithe lonke ixesha efundisa uJocelyn ngesiNgesi. Ndibetha ukuba wayesazi isiNgesi lonke ixesha. Loo faker.
Kutheni le nto u-Audrey wayekhathazeke kangaka ebukele uLeland Horne edanisa ngokungakhathali kwaye konke oko? Ngokwenyani bendicinga ukuba inkuthazo yakhe yokufumana umbulali kaLaura ukuza kuthi ga ngoku ngaba yayingumnqweno wakhe ongenakuthanani noDale Cooper?
UH NGENXA yokuba i-SHIT iyahlaziya. Wakhe wambona umntu omdala ephulukana nayo? Njengo yilahle , ulahlekelwe? Ngelinye ixesha kwisikolo samabanga aphakamileyo ndaye ndaya ethekweni apho bekufanele ukuba kukho iziyobisi kunye / okanye utywala, kodwa ndathi ndakufika apho ndabona ukuba enye yeentombazana ezithandwayo zazise utitshala obambeleyo opholileyo ndiye kuMntu oVuthayo ngaphezu kwesinye ) njengomhla wakhe. Ngokucacileyo waye… nento… kwaye wayesenza lo mngqungqo wenkawu ekhayeni ngelixa wonke umntu ethe chu ezantsi ebeka iikomityi zawo ezibomvu eplastikini. Isibini sethu sasixinene kumnyango wesango saza saxoxa ngento emasiyenze. Ukubiza amapolisa kwakungekho mbuzo. Kodwa bekungacaci ncam ukuba umntu lowo wayenxilile okanye ephezulu okanye enekhefu lengqondo, kwaye mhlawumbi wayenobungozi? Okanye mhlawumbi i-eccentric? Ngaba wayesaphula umthetho ngokubonisa iqela labafundi? Ngaba olu luhlobo oluthile lwe-DA.R.E. yoyikisa iqhinga? Ngokukrakra, ubuchopho bethu bunokuba bunyibilike ngobo busuku bebukele uMnu.Nantoni na-i-Fuck yenza umdaniso wakhe wokudanisa kwindawo engaphantsi enesitayile esineenkwenkwezi ze-JV lacrosse. Kuyothusa ukubona umntu omdala engekho emxholweni. Kukwenza ubuze yonke into oyaziyo ngolungelelwano lwendalo lwezinto. I-Twin Peaks ibisoloko ikho, ekugqibeleni.
Ngaba ndiphosakele ekucingeni iinxalenye ze Iincopho zamawele musa nje ukubambelela, kwaye hayi kuDavid Lynch kuphela uhlobo lokufumana incasa efunyenweyo? Olo khozi ndilukhankanyileyo luza engqondweni, kodwa ke nantoni na uDonna noJames bayithethayo?
Kuyahlekisa, bendicinga into enye. Ngelo xesha, ndicinga ukuba wonke umntu wasabela Iincopho zamawele njengoHomer Simpson:
Kodwa ingxaki kukuba uninzi lwalomfanekiso awufundeki njengophawu; ifundeka njengetshizi. Zonke ezi zinto zeteyiphu ze-analog ngumzekelo olungileyo: I-Lynch ihlala i-retro kubuhle bayo, kodwa inenkqubela phambili entle ngokobuchwephesha. ( Ngaphakathi kobukhosi wadutyulwa ngokupheleleyo kwidijithali.) Ifundeka ngokungalunganga ukuba inendawo apho umkhombandlela mkhulu ungenakutyhilwa kuba uMaddie akanaso isidlali seteyipu, kuba kutheni engasebenzisi uSiri nje ukufaka iaudiyo kwi-iCloud? Haha, ndiyadlala. Kodwa nawuphi na umboniso osebenzisa izinto zobugcisa ezininzi zexesha lawo umngcipheko wokuba yinto engathandabuzekiyo ekubukeni okuphindayo: into eyayinokuba yinto ekhohlakeleyo ngoku ifunyanwa njengesidenge kwaye indala.
Inye kuphela into yokurekhoda iiteyiphu esetyenziswe nguGqirha Jacoby kunye noCooper, abadlala nje ibhola.
Njengokoqobo sineminyaka engama-25 kwikamva kwaye isishicileli sam si… sisiqingatha sobukhulu. Ndivakalelwa kukuba mhlawumbi khange senze nkqubela phambili njengoko besicinga?
UMeghan Markle akazange acwangciswe ngokuzala eLing Wing njengoKate Middleton
Usuleleko lwe-Banish losuleleko ngezi zi-5 zinamandla onke kwi-Natural Antibiotic
I-Uber, iLyft yokuNqunyanyiswa kweNkonzo yokuDibanisa iiMoto e-US, Canada phakathi kwe-Covid-19
Imfashini kunye neZitayile eziBuyiswayo eziBuyisela kwiNyanga yokuziqhenya
Kutheni isafiya ishiye i-buzzfeed
ukuba ngugqirha kwangoko
Isikwere sokumemezela ukuya kwisikhululo sepenn
ukubuyela umva ekujongeni iinombolo zefowuni
Ukulala iiyure ezi-5